Friday, January 4th, 2013 at 05:08 am	/ 12 Comments Thursday, January 3rd, 2013 at 01:20 pm Wax ka Dheh: Sawir Gacmeedka Amiin Caamir
34 Responses for “Wax ka Dheh: Sawir Gacmeedka Amiin Caamir”
qoono.. says:	January 3, 2013 at 5:15 pm	KkkkKk aamin xasuusi oo sax.
halgamaa says:	January 3, 2013 at 5:22 pm	kkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Daariq says:	January 3, 2013 at 5:47 pm	yaa garwadeen kadhigay horta amiin caamir isaga madaxda markasta waxkasheegayee yaa xilkaa udhiibay.
MURSHID says:	January 3, 2013 at 6:19 pm	Qofka inuu Mazaajka ama shucuurta meesha ka taagan darso ayaa loo bahanyahay gadib uu maqaal qoro ama illustrate ama farshaxan sameeyo,Lkn dhaliil aan macno sameyneyn waxba tarimeeyso.
Meesha uu madaxweynaha booqday waxeey eheyd gobolka Blue nile ama Nile al azraq ninki Sudan tagaybaa yaqaanee aad ayuuna uga fogyahay Casimada Khortum,Sababtuu utagayna waa Xuska xoriyada Sudan, ee ma eheyn Muqabala rasmi ah,sidas darteed madaxda meesha tagay oo Idil waxaa lagu soo dhoweynayey meesha sidaas u eg oo calanka Jamhuriyada Sudan ka suranyahay.
Mida kale oo Muhimka ah waxeey tahay in adunyadu eey ka gudubtay in mar walba qofka calan la hoos dhigo,Badanaa wadanka martida loo yahay ayaa calankisu mesha ka muuqdaa.
Aniga madaxweynaha Iyo Raisul wasaraha,iyo madaxda Somalia hal dhaliil oo weyn ayaan u hayaa kana Xeel dheer mida uu ninkaan soo sawiray,Taas oo ah in iska dayee in eey umad wax taraanee Waardiyohoodi gaarka ahaa uu Burundian yahay ama Uganes,Dekedi,Airportkii iyo meel walbo oo il dhaqaala ahna eey degenyihiin,Guryahoodana ku waardiyeeyaan.Mawaxeey garan la,yihiin amaba kari la,yihiin in Wiilal Somaliyeed eey tababartaan meelaha ilaha dhaqaalaha Dalka iyo Noloshodana ku aaminaan,Amisom-na eey Peace keepers ama Peacemakers wixi uu mandate kuudu yahay ku ekaadaan Sida caadiga ah.
Aniga Dowladnimo waan jeclahay lkn mararka qaar dhaqamada ragaan waxeey kuugu ridayaan Niyad jab iyo quus’
Ilahey Somali Towfiiqda ha waafajiyo.
axmed wadani says:	January 3, 2013 at 6:21 pm	kkkkkkkkkkkkkkkkkkk
walaahi iyada xataa waa wax iswaydiin mudan
MURSHID says:	January 3, 2013 at 6:21 pm	Aniga madaxweynaha Iyo Raisul wasaraha,iyo madaxda Somalia hal dhaliil oo weyn ayaan u hayaa kana Xeel dheer mida uu ninkaan soo sawiray,Taas oo ah in iska dayee in eey umad wax taraanee Waardiyohoodi gaarka ahaa uu Burundian yahay ama Uganes,Dekedi,Airportkii iyo meel walbo oo il dhaqaala ahna eey degenyihiin,Guryahoodana ku waardiyeeyaan.Mawaxeey garan la,yihiin amaba kari la,yihiin in Wiilal Somaliyeed eey tababartaan meelaha ilaha dhaqaalaha Dalka iyo Noloshodana ku aaminaan,Amisom-na eey Peace keepers ama Peacemakers wixi uu mandate kuudu yahay ku ekaadaan Sida caadiga ah.
Mohamed Abdi says:	January 3, 2013 at 6:30 pm	Aduunku astaanta waa muhiim in aad calankaaga kaa agmuuqdo hadii kale ma matalikartid umadda somaliyeed sidaas awgeed wuu ku saxsan yahay Amiin in uu farta ku fiiqo cida madaxda sheeganeysaa oo aan astaanta wadan in uu xasuusiyo .
Madaxda soomalida in uu diyaarada helo si uu utago wadan kale ayuuba ku farxsan yahay iska daa dublamaasiyade hadii ay jiraan cid la shaqeysa ama ka warhaysa madax waynuhu yuusan calamada iloobin anana naceebeyn isna isceebayn guuleeyso Amiiin sidoo kale madaxwaynaha alle hala garabgalo shaqada uu hayo ceebtiisu waa ceebteena.
wadaad yare says:	January 3, 2013 at 7:00 pm	Qofkaan Amir Caamir ah waa nin is tus tus wada. Meesha waxaa laga furayey mashruuc Sudaan leedahey. Mana aheyn goob qaabilaad. Dadka madaxweynaha meeshuu istaagaba ceyda la dabo taagan ha ogaadeen iyagaa is caayayee ineysan isaga ceyneynin.
wiil-sallax says:	January 3, 2013 at 7:20 pm	Kenya iyo Ethiopia markuu tagaywaa la suray calanka somalia, laakiin ma arag Uganda iyo Sudan.
calikismaayo says:	January 3, 2013 at 7:59 pm	To wadaad yare
Inbadan ayaan commentiskaaga akhriyey waxaana kuu arki jirey nin somalinimadu ku dheertahay oo waxbartey qabyaaladuna kuyartahay, balse tan iyo intuu madaxweynahan cusub yimid waxaad lamid noqotey odayaasha sheegta gudoomiyanimada qabiilooyin aan magacaaban sida Xaad.
Waxaa nasiib daro ah hadii adigoo kale yahay aqoonyahankii dadka muqdisha daga maxaa laga filan karaa caamada iyo gaasdhagoolaha???
Inbadan waxaad kudooda in somaliya central goverment noqoto nidaamka federalka ahna loo baahnayn, laakiin ma isweydiisay waxa dadka qaarkii urabaan federalka.
Adigoon sidi shabaab xaqiiqda iska indha tirin isku day inaad kajawaabtid. Balse hadey jawaabtaaduu tahay waa gumaysi doon iyo waxaan loo joogin waxaan ku oran lahaa dib oogu noqo waxii dhacay 1991-kii, soo akhri hadii aadan markaas somalia joogin.
Wadaad yarow nabigu waxuu yiri qofka muminka ah god laba jeer lagama wada qaniino, sidaa daraadeed dadkii laxasuuqey shalay ee guryahoodii illaa maanta xooga looga haysto haka sugin inay kuwa cusub xamar kadhisaan si aad ayakana bari uga xoogto.
Somali waxa kaliye eey kuwada noolaan karto waa federaal hadii aad taa diidantahay waxaad diidantahay midnimada iyo qaranimada somalia.
Puntland boy says:	January 3, 2013 at 8:03 pm	Aad baan ujeclahay in bulsho hesho media xor ah Laakiin hoarybaan u sheegay Aamiin Camir waxuu kaharay warlordkii Waa ninka kaliya oo Arts & Qalin u isticmaalaya Dagaal oognimadiisa , Viva Puntland & Jubaland
jamaame says:	January 3, 2013 at 8:08 pm	MURSHID
waa sidaad u sheegtay in lagu kalsoonaado dhallinta Somaliyeed iyagaana dhulkaleh, Somaliland iyo Puntland waa dad ku dayasho mudan waxa madaxda iyo ilaha dhaqaalaha ilaasha waa dhallintii dhulka u dhashay wax dhib ahna kama taagna marka madaxda Somaliyeed dhallinta Somaliyeed haku kalsoonaadeen.
Banaadir Boy says:	January 3, 2013 at 8:10 pm	Kkkkk amin arts waa funny halkuu wax u wadana allaa og lkn waxaan oran lahaa taarikhda haku xustee farshaxankaga qaranimada ugu adeeg inagana xoogena aan ugu adeegi doonaa oo aan sandulo ugu dhigi doonaa rerka puntland sheegto inee qasab ku taageeran ama dhulka ayaa dhul soomaliyed ah aan ka kicino boosaso iyo garoowe hadee raban Ethopianka haka mid noqdaan adis ababa kaar qaxooti haka wada qaaten intooda nadifkana si sharaf leh ayee dalka ku joogayan waxasna xooga dalka ayaa la rabaa inee suurta galshan aminow adigana farshaxanka uga qeeb qaado dib u dhiska dalka
Atoore23 says:	January 3, 2013 at 8:14 pm	Assc.
Amiin Caamir waa Xanloow dambiile weeyn ah.Waana nin ku tuntay shareecada Islaamka.Sababtoo ah intaas dad buu xamanayaa oo caayayaa.Waliba waxaa u sIi dheer masawir gacmeedyada uu ogyahay dambiyada ay xag Ilaahay (swt) ka leeyahiin.Ugu dambeyn waxaan Amiin Caamir kula talinayaa in uu ka tanaasulo dambiyada uu ku jiro oo uu u laabto Allaah (swt).Allaah (swt) waakan u dambi dhaafa adoomadiisa kuwa dabi dhaafka weydiista.Iga raali ahoow.
Somaliland says:	January 3, 2013 at 8:15 pm	Amin waa runtiis ,ninkani waxba protocol Kama yaqaano malaha dad waxkala garanaya xamar waa ka dhamaanteen ,waxay ku haboonayd in ay jiraan presidential protocol team aad u khibrad dheer ,Somalia waagii hore dad gaar ah baa loo soo tababari jirey laakiin waxaa muuqda waa ceeb ummada somai oo dhan haysata
Atoore23 says:	January 3, 2013 at 8:19 pm	Asc.
Dadka waxa an fiicnayn ka sheega ninka hadda Xamar madaxweynaha ka ah Xamar ayaguna dhankooday dambiyada ka xambaarsanayaan.Wax uu yahayba ninkaas jagada uu hadda ku magacaaban yahay waa loo doortay.Waxaana habboo in loogu kaalmeeyo hawsha loo doortay si uu u suubiyo wax wanaagsan.
saeed yusuf says:	January 3, 2013 at 8:20 pm	amiin caamir waa indhaha somalida qurbaha ku nool waa cartoonis shaqadada cartoonistuna waa iny runta qosol ka dhigaan marka waxaan kula talin lahaa qof walba intusan u xanaqiin amiir camir iney arkan shaqada u uhayo dalka
Warsame says:	January 3, 2013 at 8:36 pm	Kkkkk waa run kaas madaxwayne maaha
Umaba qalmo umada soomaaliyeed inuu hor istasgo
Waxaa naga khasaaray 4sano oo aan filaynay
Madax waxne fiican
Cadaado says:	January 3, 2013 at 8:44 pm	ASC, dhamaantiin. Ninkaan Amiin Caamir hada kahorna waan sheegay, hadana waan sheegeeyaa in uu yahay nin ka mid ah problemka iyo mixnada dalkeena, dadkeena iyo diinteena heeysato. Waa fitna wade, isku dira mar walba dadka Somaliyeed, oo ku shuba “energy” iyo dhiig dadka markasta u heelan in eey qabyaalad iyo macno daro ku dhameeystaan waqtigooda. @ Walaal, Murshad, isha ayaa ka riday halka dhaliil ee aad dowlada u tilmaantay, anaga Somalida fiyowna, anagoo dowlada iyo nidaamka garab taagan, hadana dhaliisha xaqiiqda ah ee aad sheegtay ee ah in eey Madaxda Dowlada xil iska saarin wali, ugu yaraan in ciidanka waardiyeeyo ilaha dhaqaalaha, iyo guryahooda, iyo waliba jidadka in la habeeyo, si shaqadaan eey qabanayaan ciidanka Afrikaanta ah aan anaga u qabsano. Boqolkiiba boqol waxaan aaminsanahay in wax shaqeeynayo eeysan jiri doonin hadii aanan arrinkaas aad iftiimisay wax laga qaban. Taasoo ah dhisid, aruurin, iyo habeeyn ciidan dhab ah, oo xalaal ah, oo garan kara in waxa uu taagan yahay eey tahay ilaalinta shacabka iyo dalka Somaliyeed, in waxa eey u dhimanayaan eey tahay qaranimo, eeysan aheeyn qabyaalad iyo qabiil. Tanina waxeey ka bilaabaneeysaa recruitment ka duwan sida horey loo aruurin jiray ciidanka oo ahaa hab aad u fool xun oo la iska qaato kuwa aanan u qalmin ciidan. Waa in dowlada afkeeda laga helaa in eey ardayda high schoolka iyo jaamacadaha ka qorta ciidanka, iyo dad tayo leh oo saxiixa hal amaba laba sano oo contract gurmad qaran ah.
Out-land says:	January 3, 2013 at 9:42 pm	Amin markan,way kaa’hoos baxday,dawlad sanad guuraded yey munasabadu aheyd, xasan shikhna sifican abid aan la’arag ayaa loso dhoweyey.kk sawirku webi ayu ka’hadlaya, amin caamirna, webe kale ayu kahadlaya.
garikonbe waaqoodho says:	January 3, 2013 at 9:50 pm	kkkkkkkkkkkkkkkkkk
cajiib nin aan wax aragbaa dhaha waxbaan arkay
garikonbe waaqoodho says:	January 3, 2013 at 9:54 pm	kkkkkkkkkkkkkkkkkk
waa meel qurxoon qorya haa daran laguhayee.
Shaqsi puntland says:	January 3, 2013 at 9:55 pm	War kan salaad cali jeele ayaa dhaamilaha Safar kasta ma,ceebbu sookordhiyaa waxaan umalaynayaa markiisi horeba madaxwayne madoonayne wasiir buu sii qal,qaalso is lahaa nasiib wuu kuhelay rag nin ridaayay baa kula,kufay
wadaad yare says:	January 4, 2013 at 12:51 am	Calikismaayo
Hadda meeshaan ma federaal ayaa looga hadlayey? Waxa aad wax ku qiimeyneyso oo dhan waa iska waswaas adiga kugu jira ee ma ahan arrin maangal ah oo loo celinayo qawaacidda sharciga iyo caqliga.
issa says:	January 4, 2013 at 12:54 am	murshid si fiican ayaad udhigtay waxaan kuu raacinayaa wardiyihii tirada badnaa ee dunida kaamerad dhowr boqol oodoolar ah baa lagu bedeley ee xitaa taasi ma habeysan kari waayeen
Salaad says:	January 4, 2013 at 1:18 am	asc dhamaan madax weynha waxaan filyaa inuu san laqabsan ilaahada jagada loo dhiiibay oo isku haysto inuu mogdisho wali dhex meeraysanayo waxay ahayd in wax badan lafahansiiyo madax weynha intuusan garoonka kaduulin waxaa gabay kuwa akgabran oo waxba garanayn
Cadaado says:	January 4, 2013 at 1:52 am	@ wadaad yare, walaal, meel kale oo qaldan ayuu kaala qaaday calikismaayo. Waana arrin xaqiiqda ka fog waxa uu kugu eedeeyay. Aniga ayaa Ilaaheey hortiisa marqaati kuugu noqonayo in sida uu sheegay aadan is badalin markii uu Madaxweeynaha cusub xukunka qabtay. Waxaan soo joogay halkaan adiga oo Dowladii hore si tan la mid ah dadka kula talin jiray in lala shaqeeyo, oo la kaalmeeyo. Calikismaayow, walaal, maadaama aad mowduuca badashay oo aad keentay guryo iyo wax been ah oo aan la heeysan in aad ku andacooto waa la heeystaa, brother, beenta ka cabso, iyo hadal raqiis ah oo suuqyada la’iska galiyay sida in qof kasta oo qaran dumis ah, cadow kal kaal ah uu ku andacoodo beer iyo Villa iyo dabaqyo ayaa la’iga heeystaa. Waxaasi waa bulshit, eey dad maangaab ah oo ku riyoonaya wax eeysan shaqeeysan in eey helaan ayaa sidaas u hadlo. Aniga ayaa Kismaayo iyo Hargeeysa iyo magaalooyin badan oo Somalia ka mid ah guryo iyo villla ka dhisanayo. Xamarna waa sidaas oo kale.
bashe says:	January 4, 2013 at 2:42 am	acw waxaan aad ugu riyaaqay murshid qoraalkiisa iyo tusaalaha dhaw ee uu soo gudbiyey waxaan ku darayaa saldhigyada booliska ee muqdisho yaa jooga afayeenka ciidamada amison waayo waardiyaasa guud waayo waa wadan dadkale maamulaan
golden boy says:	January 4, 2013 at 8:18 am	Salaan qaaliya kadib. Asxaabeey RAXANREEB iyo inta halkan fikraddooda qortay waan idin salaamay.
Salaan ka dib, waxaan rabaa in aan walaalkay (Calikismaayo) wax yar saxo. Waxaan arkay magac uu meel kaga dhacay asgoo waliba ninkale aqoonlaawe ku duraya.
Walaale wiilkismaanyo magaca “GAAS DHAGOOL” waxaa lahaa ilaa iyo maantana leh magacuna ku baxay Dhalinyaradii iyo iskuuleydii 1982 Amxaarada iyo waxay wadatay Galdogob qabsadeen ka dibna wax alaale iyo wixii tacab iyo maal magaalada camirnaa ilaa maanta aan cidlagula xisaabtamin iska daa wixii shacab lagu xasuuqay dagaalkaas ama gooyo iyo cudur aan cidina caawin. Marka GAAS DHAGOOL wuxuu ku baxay dhalintii u halgantay xorayntii GALDOGOB ee isa sax walaale.
Marka isticmaal magacyada Xamar ku baxay sida: Faay Ali, Ku nasiibso, anaa taabtay, calasleey, tuunji madax saarte( tuunjigii ilmaha ayay koofiyad ay ku xaragoodaan ka dhigteen), mooryaan iyo kuwo kale oo fara badan xataa UNC+SSDF kudar.
xog ogaal xaqsoor says:	January 4, 2013 at 10:32 am	waxaa jawaabtan iskaleh dadka waxayn aqoon ka warbixinaya waad gafsantihiin waanad qaldantihiin waxaan inii sheegayaa faroole waa halyeey waa gantaal cadwo mana jiro nin u dhikama mana dhiman mana noola laakiin waxaa layiri doqoni xin mooyee xisaab ma ebido ma matashaan magaca aadku hadleysaan mana garan kartaan waxa xaaladi tahay aamusa xishooda ale kabaqa daaya geesiga halyeeyga caaqilka ilaahay samaha haydin tuso
Shaqsi puntland says:	January 4, 2013 at 2:55 pm	@CALIkismaanyo
sxb nin tiibi qaba ayaa qufacay ninkale ayaa mooday inuu saxday markaasu yiri shifo intuu qoslay buu yiri lagala quusay
dadkan haku daalin dulmi waxaan ahayn uma muuqdaan waa sidaad sheegtay aqoon yahan koodi markaynu aragno sidee jaahilkoodu yahay lkn wadaad yare ma,qoraalo hore ayaad ku haysatay isaagaba logu qaatay wax iska dhigdhiga muwaadin
gaasira says:	January 4, 2013 at 3:35 pm	war amin arts soomalida wuxuu mooday dad aan warka la socon madaxwaynaha sawirkiisani waa markuu blue nile state tagey waa xaflad suudaan madaxbanaanideeda u dabaaldegayso amin arts waa fadlan igu shubo sodii lagu xaman jirat awalba sawirkiisu daacad maaha
m m lafoole says:	January 4, 2013 at 3:57 pm	anigu waxan kuwafaqay ninka yiri wali waxow isk heysta n j o malaha wali wa amini la’yahay kursiga
Maxamed maxamud says:	January 4, 2013 at 6:41 pm	Anugu shaqsiyan ninka hada madaxweynaha ka ah dalka niya jab badan ayey ka mujiyeen anugu shaqsiyan wxa igu darna 2 arimod o kala ah arin dalka gudihisa u ka sameey iyo mida kale o u ka sameyey nairopi hadan kala qado 2da arimod wxy kala yihin mrki dowlada kenya ha iga baxan dadka somalida ayu wadanka kenya safar ku yimid rajada somalidna wxy aheyd in u la hadli dona dowlada kenya blse wuxu jwp ka dhgy somalida raraa mrka dadki ardada jamacadaha dhgnayey garanmeyno wx an semeyno marka la yibi meyno wxn in sameyo xassan gurgurte bye moha
Hawlgallo Amni Sugid ah oo Garowe ka socda.
Afgooye: Askar Ka Tirsan Ciidamada Dawlada oo Kufsi iyo Dhac Ku Eedeysnaa oo Galabta Xukuno Lagu Riday
Xukuumada Soomaaliya Oo Sheegtay Iney Si Naxariis Darro Ah Ula Dhaqmi Doonto Askarta Ku Caanbaxay Dhibaateynta Shacabka Soomaaliyeed